Sida loo doorto galoofyada alxanka ee TIG
Dadka badankood ereyga alxamid kuma lamaaneeyaan farshaxan, laakiin marka laga hadlayo alxanka TIG, xirfadlayaal badan oo xirfad leh ayaa kuu sheegaya inay tani tahay qaab farshaxan. Alxanka TIG waa mid ka mid ah hababka habka alxanka ugu adag ee loo barto, oo tayada alxamadeedu waa mid wanaagsan oo deggan, oo u baahan h ...
Xulashada saxda ah ee macquulka ah iyo isticmaalka 5 aag ee galoofisyada heerkulka sare leh
Gacan-gashiyada u adkeysanaya heerkulka sare Sida magacu ka muuqdo, waa galoofyo gaar ah oo badbaado leh oo heerkulka sare ah oo loo isticmaalo jawiga heerkulka sarreeya. Heerkul aad u saraysa oo isku dhafan faybar kiimiko ah oo shan-farood ah calaacal iyo faashad maqaarka u adkaysta maqaarka u adkeysiga ...
Gacantu waa qayb aad u muhiim ah oo jirkeena ka mid ah, shaqada iyo noloshuna waa kuwo aan laga sooci karin. Laga soo bilaabo wakhtigii aanu dhalanay, ilaa dhamaadka nolosha, gacmuhu way isdaba socdeen. Waa wax laga xumaado inaan inta badan iska indhatirno muhiimadiisa iyo ilaalinta gacmaheena, sidaa darteedna in m ...
Sideed qalab oo ah galoofyada difaaca kiimikada iyo qoraallo si faahfaahsan
Gacmo gashiyada difaaca kiimikada Waa qayb aan lagama maarmaan u ahayn wax soo saarka kiimikada waxayna ilaalin kartaa caafimaadka shaqaalaha. Dad badan ayaa yaqaana galoofisyada kiimikada ilaaliya, laakiin ma oga wax ku filan. Waa kuwan siddeed nooc oo ah maaddada gacmo gashi ee difaaca kiimikada, iyo brie ...